Shacabka Dalka Suudaan oo ka horyimid go’aanka Meletirga ay ku dhawaaqeen – Walaal24 Newss
April 12, 2019	3	By walaal24
Mudaaharaadka Shacabka Dalka Suudaan oo weli socda kana horyimideen go’aanka Meletirga ay ku dhawaaqay, kumannaan qof oo dibadbaxayaal ah ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan waddooyinka caasimadda dalka Suudan ee Khartoum, waxa ayna ku gacan seyreen bandow uu soo rogay golaha cusub ee milatariga ee shalay xukunka dalkaasi la wareegay.
Ismaandhaafkani cusub ayaa abuuraya cabsi ah in rabshado iyo isku dhacyo dhex maraan dadka dibad-baxyada dhigaya iyo ciidanka milatariga.
Maxaa keenay in Dalka Suudaan uu sii socda mudaharaadka Shacabka?
Markii aroornimadii hore ee shalay oo Khamiis ahayd ayaa gawaarida milatariga dalkaasi waxa ay galeen dhismaha weyn ee ku yaal magaalada Khartuum ee ay ku yaaliin wasaaradda gaashaandhigga, xarunta ciidamada milatariga iyo guriga madaxweyne Al-Bashiir.
Wasiirka wuxuu sheegay in Suudaan ay dhibaato ka haysatay “maamul xumo, musuq-maasuq iyo caddaalad darro” wuxuuna ka raali galiyey shacabka “dilalka iyo rabshadihii dhacay”.
Urur Goboleedka IGAD oo ka hadlay Doorashada maamulka Jubbaland
Madaxweyne Danni “Nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyey la gacan bidixaynaayo, wadadii loo baahnaa uusan ku socon”
Madaxweyne Farmaajo “Waxbarashadu waa aasaaska qofka bini aadamka ah in ubadkeenna aan u sameyno fursado waxbarasho…….
Madaxweynaha Hirshabeelle oo ku baaqay in wadahadal lagala yeesho Ethiopia wabiga Shabeelle
Mareykanka ayaa kaga digay Turkiga in uu weerar ku qaado maleeshiyada Kurdish-ka
Kulan ka dhacaya magaalada Vienna loogana hadlidoono nuclear-ka Dalka Iran
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Dalka oo booqday Shirkadaha dhismaha Iyo Gawaarida Dalka Shiinaha